I-Gaia Lodge, uNr. Hartington, kwiSithili sePeak - I-Airbnb
I-Gaia Lodge, uNr. Hartington, kwiSithili sePeak
Indlu epholileyo, exineneyo kunye ne-bijou enetubhu eshushu eyenziwe ngamaplanga, igadi yabucala kunye nesitshisi selogi. Igqibelele njengendawo yokubaleka yothando kwababini.
Upholile ecaleni kwesitshisi selog okanye uzitobhise kwi-tub eshushu eyongezwe ngamaplanga phantsi kweenkwenkwezi. Olu tshintsho luhle, luthambileyo lwesi badi luxinene, i-bijou kwaye lugqibelele njengendawo yokuphumla yothando kwababini. IGaia Lodge, eyayisakuba yindawo yokufuya iihagu, ihlala kwindawo ephakamileyo kumda weDerbyshire kunye neStaffordshire owela phakathi kommandla osemazantsi wePeak District Park. I-Gaia Lodge inemibono ye-panoramic yelizwe elingenasiphelo, elinothango lwendalo kunye neendonga zamatye ezomileyo; uphawu lweDerbyshire Dales. Inokufunyanwa iiyadi ezili-165 kude nekharavani eqhuba usapho kunye nendawo yokukhempisha yase-Upper Hurst Farm, ewongwe ngembasa yoMgangatho wokuSingqongileyo. Indlwana efudumeleyo, yegritstone iye yahlaziywa ngothando olukhulu, kunye neetrasi eziveziweyo zeDouglas fir King-post, umgangatho weflegi yamatye kunye nesitshisi selogi ngobusuku obupholileyo.
I-cottage ifakwe ngokuhonjisiweyo ngeekhethini zelinen ezenziwe ngesandla kunye neemfama, iintsiba zerhanisi kunye nemiqamelo ephantsi kunye neduvet. Sikwanayo nelinen yebhedi yomqhaphu waseYiputa kunye neetawuli, iigawuni zokunxiba ezimfumamfuma kunye neetshokholethi ezenziwe ngesandla ekufikeni (ukubhukisha ngo-2021) okanye isiphazamiso sasekhaya sakusasa (ukubhukisha ngo-2022). Yongezwa ngakumbi ngokufudumeza okuphantsi komgangatho olawulekayo kwiinzwane ezinwabuzelayo! Ikhitshi linomgangatho wokusebenzela wegranite onezilungiso ezisemgangathweni kunye nezinto zokufakelwa kunye nezixhobo zangoku, kubandakanya nesitya sokuhlamba izitya.
Kukho indawo yokuhlala eneflegi yelitye enembonakalo esentshona ejonge i-Ecton Hill ebandakanya umgca wokuhlamba. Kukho isitiya esincinci, esinesango, kunye nesibiyelwe ngodonga esinomntla-ntshona apho unokonwabela ukuthotywa kwelanga lokugqibela. Lo myezo ukhokelela kwenye indawo yabucala ngokupheleleyo, ehonjisiweyo yendawo yepatio (esemazantsi-ntshona ejonge kwaye ibe yindawo encinci ye-suntrap) enemisedare ebomvu eyi-1700L, ibhafu etshiswa ngamaplanga, ukunika indawo yokuhlala ekhethekileyo kwaye ekhumbulekayo. I-tub eshushu ishushu ekufikeni kwakho kwaye ibandakanyiwe kwixabiso lokuhlala okufutshane (ukuya kubusuku be-4), ukuhlala ixesha elide kuya kufuneka ikhutshwe, icocwe, ifakwe kwakhona, kwaye iphinde ifakwe kwisiqingatha sokuhlala kwakho okufakwe kwixabiso lentengo. Ukubhukisha ngo-2022 kodwa kuya kuba nentlawulo eyongezelelweyo ye-£100 yokubhukisha ngo-2021.
"Onjani wona ubuncwane obuncinci - ngandlela zonke. USue wenze indawo yokulala epholileyo kunye nobunewunewu. Indawo yokulala ihonjiswe ngothando kwaye inefenitshala. USue ucinge ngayo yonke imfuno yakho kwaye wayixhobisa ngokufanelekileyo. Ibhafu eshushu iyamangalisa ngokupheleleyo - ngakumbi ngoNovemba.. USue unobubele kwaye unesisa kwaye ukhona ukunceda ukuba kukho imfuneko kodwa akangeneleli nangayiphi na indlela. Ukuhamba kwalapha ekhaya kuyamangalisa kwaye kukho indawo ezininzi zokundwendwela ekuhlaleni kubandakanya ii-pubs ezilungileyo kunye neendawo zokutyela. Sue - kufuneka ube nebhongo ngendlela emangalisayo kwindawo yakho ezukileyo. Enkosi kakhulu kuthi sobabini xx"
- UJohn kunye noSteph-Derby
IGaia Lodge iseUpper Hurst Farm iikharavani, iCamping kunye neGlamping kumbindi wePeak District Park.
Ibekwe eStaffordshire's Manifold Valley kodwa uhamba umgama ukuya eDerbyshire Dales, iGaia's Hideaway ibekwe kumda wezi ngingqi zimbini zintle. Iindlela zokuhamba ngebhayisekile, ukukhwela intaba, ukuqubha emanzini avulekileyo, iilali ezibukekayo kunye namakhaya amahle akufuphi nendawo yokulala. Iivenkile zasefama, iipari ze-ayisikrimu, iikhefi kunye ne-pubs epholileyo, iGaia Lodge yeyona ndawo ifanelekileyo yokuhlola ukuba iSithili sePeak sinokubonelela ngantoni. Unokufumana ulwazi ngokusijonga phezulu, kwaye unokuthetha nathi ngokuthe ngqo.
Sisemaphandleni ngoko ke uxolo noxolo luqinisekisiwe, ngelixa sisembindini weedolophu ezine ezinkulu: iBuxton, iBakewell, iAshbourne, iLeek. Zininzi iindawo zokutyela ezikufutshane kunye ne-pub kumgama wokuhamba. Ininzi into enokuphononongwa apha, awuzukudikwa!
Uncedo lufumaneka kumnini uAmy (umnyango olandelayo) kunye/okanye uLynn kwisiza seKharavani (iiyadi ezili-150 kude).
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Buxton